Akụkọ - Gịnị ga -eme ma ọ bụrụ na ị na -eji oxygen ma ọ chọghị ya?
Ahụ gị enweghị ike ịdị ndụ na -enweghị ikuku oxygen ị na -eku site na ikuku. Mana ọ bụrụ na ị nwere ọrịa ngụgụ ma ọ bụ ọnọdụ ahụike ndị ọzọ, ọ nwere ike ị gaghị ezu ya. Nke ahụ nwere ike hapụ iku ume gị ma kpatara nsogbu n'obi gị, ụbụrụ gị na akụkụ ahụ gị ndị ọzọ.
Mgbe ndị ezinaụlọ na -arịa nkụchi obi na hypoxia, ihe mbụ onye ọ bụla na -eche bụ ịga ụlọ ọgwụ. Mana mgbe ị ruru ụlọ ọgwụ, ị ga -achọpụta na ịnweghị ike ị kwụ n'ahịrị. N'oge a, ọ dị mkpa ịkwadebe igwe na -emepụta ikuku oxygen n'ụlọ. Ugbu a ejirila teknụzụ ikuku oxygen sie sie ike, ị gaghị aga ụlọ ọgwụ maka ikuru ikuku oxygen. Ị nwere ike iji ikuku na -eme ka ikuku oxygen banye n'ụlọ. Ya mere, lita ole dabara adaba maka igwe na -enye ọkụ oxygen?
Ka ọ dị ugbu a, ndị na -etinye ikuku oxygen n'ụlọ na ahịa nwere 1L, 2L, 3L, na 5L oxygen concentrators dị iche iche. Nke buru ibu ọ ka mma? Ọ bụghị n'ezie. Nhọrọ nke onye na -etinye ikuku oxygen n'ụlọ na -adabere na ahụike anụ ahụ yana mkpa ojiji. Dịka ọmụmaatụ, maka ndị na -adị obere hypoxic na naanị na -eji ya maka ebumnuche nlekọta ahụike, ha enweghị mkpa pụrụ iche maka ọnụọgụ na itinye oxygen. Naanị họrọ igwe otu-lita n'ahịa. Mana maka ndị nwere nnukwu ọrịa hypoxia na -achọ awa 24 kwa ụbọchị maka nlekọta ahụike na iku ume ikuku oxygen, ha nwere mkpa pụrụ iche maka itinye uche na nrugharị nke ikuku oxygen. Ọ dị mkpa ịhọrọ onye na-eweta ikuku oxygen na-enwe mmepụta ikuku oxygen na-aga n'ihu na awa 24 na mkpu mkpuchi ikuku oxygen. N'ozuzu, ọ dabere na igwe lita atọ ma ọ bụ igwe nwere ikuku ikuku dị elu yana ịta oxygen. Ojiji akọwapụtara chọrọ ndị dọkịta ọkachamara ka ha duzie ọgwụgwọ ikuku oxygen.
Maka ịhọrọ igwe ikuku ikuku nke ụlọ, anyị ga -eme mkpebi dabere na ọnọdụ onye ọrụ, anyị enweghị ike ịme nhọrọ kpuru ìsì. Enwere ọtụtụ ihe ọmụma dị mkpa n'okwu akọwapụtara nke ikuku oxygen na ọgwụgwọ oxygen na ịntanetị, nke kachasị mma na ịntanetị bụ ikuku oxygen nke Gravitation Medical. Ahụike Gravitation nwere ahụmịhe R&D ọtụtụ iri afọ na ụlọ ọrụ ikuku oxygen, ike teknụzụ siri ike, yana ọtụtụ ikuku oxygen ụlọ nwere akara ikuku oxygen dị iche iche, nke nwere ike gboo mkpa ndị otu dị iche iche.